पोहोर दशैंको तलब यस साल, यसपटकको अर्को साल ! – Fewa Times
पोहोर दशैंको तलब यस साल, यसपटकको अर्को साल !
प्रकाशित मिति: October 3, 2019 11:13 am
काठमाडौँ – साझा प्रकाशनका कर्मचारीले यो वर्षको दशैंको पेस्की अर्को वर्षको दशैंमा पाउने भएका छन् । विगत एक वर्षदेखि रोकिएको तलब बल्ल हात परेपछि मख्ख परेका कर्मचारीले गएको दशैं पेस्कीसहित एक वर्षको तलब हात पारेका हुन्।
‘एक चिहान’ र ‘सबैको नेपाली’ तथा ‘लिङ्क अग्रेजी’ गरी तीन पुस्तकको बिक्रीबाट प्राप्त करिब ४ करोड रुपैयाँले एक वर्षको तलब खुवाइएको हो। साझाका लेखा विभाग प्रमुख होम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७४ फागुनदेखि २०७५ कात्तिकसम्मको तलब बल्ल लिएको जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘टाट पल्टिन लागेको संस्थालाई बल्लतल्ल आफ्नै कमाइले पुस्तक छपाइ गरेर तलब वितरण गरेका हौं।’ उहाँले वि।सं ०७३ साउनदेखि २०७५ आसारसम्मको सञ्चयकोष जम्मा गर्न सफल भएको, यस वर्षको रकमको ठेगान नभएको, दशैं खर्च झन् टाढाको विषय भएको विवरण दिए।
‘अहिलेकै रफ्तारमा काम गरे अबको तीन वर्षभित्र सबै कर्मचारीको तलब खुवाउन सकिन्छ।’– उनले भने । साझामा अहिले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तलबमा खर्चिएको छ। यहाँ हाल ६८ स्थायीसहित ७४ कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।